Aqriska iyo Qoritaanka | New City School
Dheeli tiranta Akhriska iyo Qoritaanka
Horumarinta ee akhris-qoraalka waxaa waaye aasaaska dhammaan maaddooyinka waxbarashada. Deegaan oo akhris iyo qoraal leh, taas oo ardeyda bareyso casharo akhriska iyo qoraalka leh waqti kasto iyo maado kasta, iyo halkaaso ka masuul eh la wadaago shaqadooda, una oggolaaneysa ardaydu inay kordhiyo iyo qiimaynta wax-barashadooda. Qiimeynta macalinta ee socoto ee xirfadaha akhriska iyo qoraalka waxee u ogolaanaysa arday walbo in labaro wuxuu uu baahanyahay. Dugsiga New City, waxaanu isticmaalnaa dhismeedka soo socda si aan uu sameeno hab akhris-qoraal isku dheeli tiran.
Akhris la hogaaminayaan
Carruurta waxaa la siiyaa casharo akhriska ayakoo kooxo yaryar eh. Waxay akhriyaan buugagta caruurta oo heerkooda eh (wee akhrinaayaan wee na fahamyaan 90 % qoraalka). Macalimiintu waxay bilaabaan cashiro yaro oo ka caawin doonaa carruurta xirfadaha gaar ah ama fikirkada loo baahan yahay akhriska iyo fahmida buugga. Markaas, ardayda shaqsi ahaan ayee uu akhrisanaayaan buugga. Macallinka wuxuu qiimeenaayaan ardayda markee akhrinaayaan. Cashirka wuxuu ku damaanaa wadahadal waxa la birta markaas.
Akhris La wadaagaayo
Akhriska noocan wuxuu dhici karaa habka la akriska arday kale, akhriska warbixinta subixi, qabanayso masrax akhristaha ama wadaagaya doorashada gabayada.
Akhris Madax banaan
Ardayda kili gooda ayaa akhrisanaayo. Waxay dooranaayaan buug iyaga u gaar ah wexee na ku qorayaan horumarkooda alwaax akhriska iyo/ama joornaalada.
Macalinka ama ardayga wexee kor ugu akhrinayaan fasalka. Waxyaabaha loo doortay oo kor loo akhriyo waa suugaanta carruurta oo aad u fiican ee ku mashquulsan carruurta ee farxada akhriska iyo wada hadlayo sheekooyin wanaagsan, qoraal aad u fiican iyo doorashooyin hadalka xiiso leh.
Qoraalka la wadaago
Guud ahaan ama kooxo yaryar, carruurta iyo macalinka isku kaashanaayaan qoraal halkaaso macallinka xoojinaayo hadaf gaar ah barashada. Tusaale ahaan, goolka barashada hadii uu yahay in la qorxiyo qoraalka ayadoo lagu daraayo faahfaahan iyo cayimidda. Ardayda waxay wadaagi doonaan hawsha raadinayaan meesha lagu daraayo erayada iyo kala tashiga sababta.
Qoraalka la hogaaminayaan
Waqtiga qoraalka waa qaabka ay ardaydu qoraalkooda lagu hogaamiyo. Waqtigaas, carruurta qoraalkooda ayee la maraayaan nidaamka qoraalka. Soo ururinta fikradaha, qoritaanka, waxlooga, iyo nashrinta daabacaadda. Waqtiga qoraalka wuxuu ku bilaabdaa cashar yar oo laga yaabaa in uu ku saabsanyahay nooc gaar ah oo qoraal ah, adeegsiga ereyga, xarakaynta, isticmaalka hagaajinta, calaamadaha.
Qoraalka Madax banaan
Ardaydu waxay leeyihiin fursad ay ku qoraan hab kasto ay doortaan. Sida noocaan oo kale ah oo qoraal ah waxaa loogu talagalay in ardayda siiyaan dareen ah awoodda qoraal, qoraalka madax banaan inta badan waa wax ardayda ugaar ah loo ilaaliyo oo ay arkeen macalimiinta kaliya ilaa ardayda u fasaxaan dadka kale in ay aqriyaan.
One thought on “Aqriska iyo Qoritaanka”
jen thompson (grade k Stella Durdiyevs' gramma) February 5, 2014 at 4:50 am